Golaha wasiirrada DF oo maanta ansixiyey heshiiska SOOMAALIYA iyo Norway | Caasimada Online
Home Warar Golaha wasiirrada DF oo maanta ansixiyey heshiiska SOOMAALIYA iyo Norway
Golaha wasiirrada DF oo maanta ansixiyey heshiiska SOOMAALIYA iyo Norway
Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha Wasiirrada ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta shir aan caadi aheyn Muqdisho ku yeeshay ayaa ansixiyey oggolaanshaha heshiiska ay Norway ku caawineyso deyn-cafinta Soomaaliya.
Sidoo kale dowladaha Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa bixinaya deynta ay Soomaaliya ku leeyihiin Hey’adda lacagta Adduunka iyo Bangiga horumarinta Afrika.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii hey’adaha maaliyadda adduunka iyo dowladaha deymaha ku leh Soomaaliya ay sida la sheegay ku qanceen dib u habaynta dowladda Soomaaliya ay ku sameysay hey’adaheeda maaliyadda intii ay jirtay xukuumadan.
Hey’adda lacagta adduunka ee IMF, Bangiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika ee ayaa la filayaa in todobaadyada soo socda ay ku dhawaaqaan in deynta laga cafiyay Soomaaliya, sida lagu sheegay war ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya.
Arinta ayaa hadii ay suurta gasho, oo deymaha laga dhaafo Soomaaliya, waxay bog cusub u fureysaa dhaqaalaha dalka.